မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: မြန်မာ့ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေအပေါ် စိုးရိမ်ကြောင်း ကနေဒါပြောကြား “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
မြန်မာ့ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေအပေါ် စိုးရိမ်ကြောင်း ကနေဒါပြောကြား
ကနေဒါနိုင်ငံအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ သံအမတ်ကြီး အပြန်အလှန် ခန့်အပ် တာ အပါအဝင် မဟာဗျူဟာမြောက် ထိတွေ့ဆက်ဆံရေး စတင်ထားပြီ ဖြစ်ပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ကနေဒါက ချမှတ်ထား တဲ့ ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုတွေကိုတော့ ဖယ်ရှားဖို့ မရှိသေးဘူးလို့ ကနေဒါ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး John Baird က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာလီကျွန်းမှာ ကျင်းပနေတဲ့ အာရှ လုံခြုံရေး ညီလာခံမှာ မနေ့က ပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးဟာ လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စ ပြောဆို ဆွေးနွေးနိုင်ရေး သက်သက်သာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ကနေဒါ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်ရေး အခြေနေတွေကို မြန်မာနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်နဲ့ ဘာလီမှာ တွေ့ဆုံစဉ်မှာ ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်း သူက သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်ရှိရေးနဲ့ လုံခြုံရေး ကိစ္စတွေကို ကနေဒါအစိုးရနဲ့ ကနေဒါပြည်သူတွေက စိုးရိမ် ပူပန်နေတာကိုလည်း မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကို ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ Mr. Baird က ပြောပါတယ်။
အလားတူပဲ ကနေဒါ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သြစတြေလျနဲ့ နယူးဇီလန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးစဉ်မှာလည်း ထည့်သွင်း ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကနေဒါနိုင်ငံဟာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးအရ ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုတွေကို ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်မှာ ချမှတ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။
Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 3:34 PM
ကိုယ့်နိုင်ငံကို ချစ်ပါ။ ဗမာတွေဟာ လူဖျင်းတွေ၊ လူကြောက်တွေ၊ လူပိုတွေ၊ လူရိုင်းတွေ လူဂွစာတွေ၊ လူမတရားတွေလို့ကမ္ဘာက အထင်ခံရအောင် မလုပ်ပါနှင့်။
ဗမာတွေဟာ ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာ အလုပ်လုပ်ပြီး ဂုဏ်ယူကြပါ။
ပြည်သူတွေကို အလင်းပေးမယ့် မီးတပွင့်
ပြည်သူတွေ မဲပေးခဲ့တဲ့ အစိုးရ
မြန်မာတွေ ဘာတွေ တွေဝေနေသလည်း
Now is Right time for BURMA.
"Just do it!!
ဗမာပြည် ဘယ်လဲ ဘာလဲ?။
ဒီမိုကရေစီ အစစ်ဆိုတာ ဘယ်မှာပါလည်း
“ လွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်ရေး မရှိရင် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မရှိနိုင်ဘူး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မရှိရင် နိုင်ငံသားတွေဘ၀ ဘယ်လုံခြုံမလဲ၊ ဒီမိုကရေစီကိုသွားဖို့ စစ်မှန်တဲ့ တိုးတက်မှုလည်း မရှိနိုင်ဘူး။ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်မယ်လို့ ပြောနေတဲ့ အစိုးရဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ဆိုရင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဆိုတာ ဘယ်လိုလုပ် အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ရှိစရာလိုတော့မှာလဲ ”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (အမေရိကန် အောက်လွတ်တော်မိန့်ခွန်း)
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ တည်ထောင်နိူင်အောင် ကြိုးစား ခဲ့သူ များကို ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကျင့်သုံးနေပါတယ်ဆိုတဲ့ လူအများ က အကျဉ်းချ ထားတာကို မှန်ကန် ပါတယ်လို့ ဘယ်လို အသိဥာဏ်မျိုးနဲ့များ လက်ခံပေးကြတာပါ လည်း ။ အတ္တမကင်းကြတဲ့ လူသားတွေမှန်ပေမယ့် လူနည်း စုကြောင့် လူအများ ဒုက္ခ ကြီးစွာခံစားနေရတာကို တရားပါတယ်လို့ အခွင့်အရေးရလိုဇော နဲ့ တော့ မထောက်ခံပေးကြပါနဲ့ လို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ် ဗျာ ။
NLD ဆိုတာ ပြည်သူလူထု
“တရားဥပဒေအရ ရပ်တည်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်၊ မရှိတယ် ဆိုတာ ကို သူတို့ တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်မှာ။ ဒါပေမဲ့ တကယ်ကို အဲန်အယ်လ်ဒီ က ရပ်တည်နိုင်လား၊ မရပ်တည် နိုင်လား ဆိုတာ ကိုတော့ ပြည်သူလူထု ကပဲ ဆုံးဖြတ်မှာပါ ”
Photo of the year in Burma
Do you need Zawgyi font?
ပြည်တွင်းမှ အင်တာနက်စတင်သုံးစွဲသူများ၊ အသုံးပြုနေ သော်လည်း အမှားအယွင်းပြနေသူများအတွက် ဤဇော်ဂျီ ဓါတ်ပုံကိုနှိပ်၍ အများသုံး ဗမာဖောင့် ကိုရယူပါ။ Click here, you may get fonts to read the square fonts. Zawgyi-One latest version1.0.0.1.1 Keyboard layout ကဒီမှာ **window7တွင် ဇော်ဂျီဖောင့်ရိုက်မရပါက ဒီ ဖိုင်ကို ယူပါ. အစစ အဆင်ပြေမှာပါ. မရက Cbox မှာ ရေးထားခဲ့ပါခင်ဗျား။
ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ ဇာတ်လမ်းတွဲများကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ ၁ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ ၂ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ ၃ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ ၄ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ ၅ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ ၆ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ ၇ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ ၈ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ ၉ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ ၁၀ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ ၁၁ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ ၁၂ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ ၁၃ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ ၁၄ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ ၁၅ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ ၁၆ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ ၁၇ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ ၁၈ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ ၁၉ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ ၂၀ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ ၂၁ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ ၂၂
ကြပ်ပြေးအရှုပ်တော်ပုံ(၁ မှ၂၁) ပေါင်းချူပ် အား download လိုက ဒီမှာ click
ဤလအတွင်းတင်ခဲ့ သမျှ သတင်းများ လွယ်ကူစွာ ရှာဖတ်ရန်
▼ 2011 (2374)
▼ July (379)
မလေးရှားပွဲစားက ရိုက်နှက်လို့ မြန်မာအမျိုးသမီး ၄ ဥ...
အစိုးရတပ်များ ရှမ်းဌာနချုပ်က ဆုတ်ခွာ
နိုင်ငံတကာ ၀င်ဆန့်ဖို့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွှတ...
တူရကီ ကြည်း၊ ရေ၊ လေ ဦးစီးချုပ်များ နှုတ်ထွက်
အိတ်ဖွင့်ပေးစာအပေါ် အပြုသဘော ဆောင်ရွက်မှုလို့ သမ္မတအြ...
ရခိုင် ရေကြောင်းလိုင်းများ ပုဂ္ဂလိက ရရှိပြီးနောက် သ...
တိုင်းရင်းသားပါတီတွေ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဒေါ်စုနဲ့အ...
ကရင်နီဒေသခံခြံမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းသည် လူ့အခွင့်အ...
ကျောက်ဖြူ အများပြည်သူပိုင် မြေကွက်များ ဗိုလ်ချုပ်ြ...
ထိုးစစ်ရုပ်ရန်နှင့် တနိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ်ရန် KIO ထပ...
ကျောက်မဲ ပစ်ခတ်မှု ၃ ဦးသေ
အိန္ဒိယက ချင်းပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဒေါ်လာ ၆ သန်း ကူမည...
မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်း မော်တာကျည်ဖြင့် အပြန်အလှန်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ လက်ခံယူ
ကားရပ်နားရန် နေရာ၏ အခက်အခဲ
ဓာတုပစ္စည်းစွန့် ပစ်မှု စနစ်ကျသင့်ပြီ
သံဈေးတွင် အသက် ၁၄ နှစ် အရွယ် ကလေးငယ် တစ်ဦး အလုပ်...
ဘောပွဲ သို့ မဟုတ် ဆဲပွဲ
ကောနေသော အမိ ဧရာဝတီ
၂၀၀၇ သံဃာ့လှုပ်ရှားမှု အကြောင်း သတင်းပို့သူ ရွှေသံစဉ်...
၁၉၇၅ ၇၆ ၇၇ ဘော့လုံး အသင်း တွေရဲ့ ခြေမမှီသေးတဲ့မြ...
ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်း ဆက်မလုပ်ရန် KNU တားမြ...
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း တပ်များက အစိုးရ စစ်ယာဉ်တန်းကိ...
မြန်မာစစ်တပ်အား စုပေါင်းတိုက်ခိုက်ရန် UNFC တိုက်တွ...
ကလေးများ စစ်တပ်ထဲရောင်းစားသူ တရားစွဲခံရ
မြန်မာကလေးငယ် ၈ ဦးကို လူကုန်ကူးဂိုဏ်းမှ ထိုင်းရဲ ...
ဒေါ်စု တရားစခန်း ဝင်မည်
မြန်မာစစ်တပ်အား သျှမ်းပြည်တပ်မတော် SSA နှစ်ဖွဲ့ ဟန...
တိုင်းရင်းသားဒေသ စစ်ပွဲများ အမြန်ဆုံးရပ်ရန် ဒေါ်အော...
ကျောက်စိမ်း သိန်းတထောင်ဖိုး ရှမ်းပြည်တွင် ဖမ်းဆီး
လာဘ်စားမှုဖြင့် သင်္ကာမကင်းခံရသူ ထိပ်တန်းစစ်ဗိုလ်ချုပ...
စစ်ရဲ့သားကောင်မှာ လူတွေချည်းမဟုတ်၊ တိရစ္ဆာန်တွေလည်း...
၁၃ နှစ်ကလေးအား မြန်မာတပ်မှ ရှေ့တန်း သတင်းယူရန် အဓ္ဓ...
မြန်မာစစ်တပ် အတွက် ရိက္ခာနှင့် မြင်းကုန်းနှီးများ သ...
ငွေကြေးမတတ်နိုင်၍ မီတာဘောက်စ် ထပ်မလဲချင်ဟု ဒေသခံမျ...
တပ်တွင်း နှင့် အစိုးရသစ် များအတွင်း အက်ကြောင်းများ...
အစိုးရက ရှမ်းမြောက်ပိုင်းကို ဆွေးနွေးရန် ကမ်းလှမ်း...
ဗိုလ်ချုပ်တင်ငွေ “သန့်ရှင်းသော အစိုးရ” သားကောင်ဖြစ...
ဆန်ရှင် ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ရန် ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ တိုက်တွန်...
အစိုးရတပ်က အိမ်ထောင်စု ၂၀၀၀ ခန့် ပြောင်းရွှေ့ခိုင်း...
လွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး ခေါ်ယူဖို့ စီစဉ်
မြန်မာ-ထိုင်း နယ်စပ် တံတားသစ် ထပ်ဆောက်မည်
လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်ခံနေရတဲ့ စစ်ပွဲတွေရပ်ဖို့ ...
အင်တာနက် အလွန်အကျွံသုံးလျှင် ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်န...
ချင်းပြည်နယ်က သစ်များ ထုတ်ယူမှု
ကျောက်ဖြူမြေကွက် ဗိုလ်ချုပ်များ အပိုင်စီး
၀န်ကြီး ဦးအောင်ကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံမှု ဒေါ်စု NLD CEC ကိ...
KIA နှင့် မြန်မာစစ်တပ် တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ် ၊ ရွာသားမျာ...
တရုတ်ကုမ္ပဏီ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများ စချ
KNU ကို ရှင်းရန် ထိုင်း ဖိအားပေးခံရ
စစ်တပ်၏ ဗိုလ်ကျမူ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရ မတားဆီးနိုင...
ဒေါ်စုနှင့် တွေ့ဆုံမှု ကုလကြိုဆို နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသ...
၁ ဒေါ်လာ ၆ ကျပ်သာရှိသော ငွေလဲနှုန်း ပြင်မည်
သေနတ်သမား Breivik ရုံးတော်မှာ အစစ်ခံမယ်
ဘာရိန်း ဆန္ဒပြပွဲ နှိမ်နင်းမှု ကော်မရှင်ဖွဲ့ စုံစမ်း...
ပဲခူး​ရေ​ကြီး ဘူတာရုံ​ရှေ့ လှေလှော်​နေရ
အလုပ်သမားအခွင့်ရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ ထန်းတပင်မှာ ...
မြန်မာ့ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေအပေါ် စိုးရိမ်ကြောင်း က...
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူသတ်မှု ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း သြစတြေ...
၃ စီးမြောက် ထိုင်းစစ်ရဟတ်ယာဉ် ပျက်ကျ
တရုတ် ကျည်ဆံရထား ၂ စီးတိုက်မှု လူ ၃၀ ကျော် သေဆုံး
မြန်မာကို ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ပေးဖို့ အာဆီယံ အဆင်သင့် မဖြစ်သေ...
မြန်မာအစိုးရတပ်တွေ SSA ၀မ့်ဟိုင်းဌာနချုပ်ကို ၀ိုင်...
ဒေါ်စုနဲ့ အစိုးရ၀န်ကြီး တွေ့ဆုံမှု ထူးခြားတဲ့ရလဒ် ရှ...
ပြည်တွင်းက အမျိုးသမီးများကို ပစ်ပယ်မထားပါနဲ့
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူသတ်မှု ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း သြစတြေ...
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဟောင်း မောင်ဦး ရခိုင်လူထုကို ဘာတေ...
အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တို့၏ သမီးများက ပြည်သူကိုစော်ကားသည့်...
ဝယ်မယ်ဆို ရောင်းမယ် ဟန်လေး Friday, 22 July 2011 18...
နော်ဝေး အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခဲ့သူကို စွဲချက်တင်ပြီ...
နော်ဝေအကြမ်းဖက်မှု လူ ၉၀ ကျော်သေဆုံး
နော်ဝေးအကြမ်းဖက်မှု မသင်္ကာသူ ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း ၀...
ကမ္ဘာကျော် အဆိုတော် အေ​မီ ဝိုင်း​ဟောက်စ် ရုတ်တရက်ေ...
ကချင်စစ်ပွဲကြောင့် ဧရာဝတီသဘောင်္များ ဝင်ငွေ ၃ ဆကျော်...
ဦးဝင်းတင်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အားပေး
တရုတ်မှောင်ခိုရာဇာတဦး ကနေဒါက ဖမ်းဆီးလွှဲအပ်
ငြိမ်းချမ်းရေး ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်
မြန်မာအစိုးရ ကြိုက်ရာလမ်းရွေးဖို့ ဟီလာရီ် ပြောဆို
သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း နှစ်လည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မြန်မာအစိုးရ၀န်ကြီးတို့ တွေ့...
ထောင်ထဲက နေဘုန်းလတ်ရဲ့ ကဗျာ
ဧရာဝတီ ရေကာတာ အစီရင်ခံစာ
မင်းကိုနိူင်နှင့် ဇာကနာသို့( ဂုဏ်ပြုသီဆို လားရှိ...
ကမ္ဘာ့ဈေးအတိုင်း မြန်မာ့ရွှေ တက်ခွင့်မပြု
မိုင်းကုတ်ကျောက်မီးသွေး တူးဖော်ရေးစီမံကိန်း ထိုင်း...
မြန်မာ့တပ်မတော်အား အတုမခိုးရန် ကေဒါတပ်သားများအား ဗ...
ကြောင်နတိုးဆည်ရေ ဖေါက်လို့ သီးနှံပျက်စီး
စစ်လက်နက်အထောက်အပံ့ ရပ်ဆိုင်းရေး အိန္ဒိယ အစိုးရကို ...
ဟန်ဆောင်ပြုံးတွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပေမယ့်......လက်တွေ...
► 2010 (3509)
► 2008 (3221)
တလူလူလွင့်နေဆဲ ဒို့ အလံ
ဖတ်ကောင်းမဲ့နေရာများ ကမာနီလာ ကဒေါင်းညင်သာဒေါင်းအိုးဝေကိုဇာကနာကိုညောင်ရမ်းဂွတိုကိုထိုက်ကိုပုထုဇဉ်ကိုဖိုးဇေကိုသန့် ဇင်အောင်ကိုလူသစ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လမ်းလျှောက်ခြင်းဆုံစည်းရာဆောင်းယွန်းလဆိုးဝှတ်ဒီရေနေခြည်ဦးနှင်းခါးမိုးပန်းဗေဒါဖို့ ဝိန်းမှသူရဲကောင်းများ..မဖြူဖြူသင်းမသဒ္ဓါမာယာမဂ္ဂဇင်းမျိုးဆက်အမှတ် (၅)မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေးလေဆန်ပျံမဲ့မျိုးဆက်သစ်၏ ငြိမ်းချမ်းဌက်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် မိုင် ၃၀၀၀ ခရီးသည်ပြည်သူ့အသံလင်းလက်ကြယ်စင်လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲသမိုင်းထဲကရက်စွဲများသီရိလင်္ကာရောက်သံဃာတော်များ(မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအစည်းအရုံး)အဖွဲ့ဒေါင်းတမာန်phyowai-mmpဒီမိုဝေယံအမိမြန်မာပြည်သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာများမျိုးဆက်များ ၉၆မျိုးချစ်မြန်မာအရှင်မေတ္တာစာရအသားထဲမှ..လောက်ကောင်များအိမ်မက်အိမ်ကလေး
ဖတ်ကောင်းမဲ့နေရာများ ကမာနီလာ ဒေါင်းအိုးဝေကိုဇာကနာကိုညောင်ရမ်းဂွတိုကိုပုထုဇဉ်ကိုသန့် ဇင်အောင်ကိုလူသစ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လမ်းလျှောက်ခြင်းဆုံစည်းရာဆောင်းယွန်းလဆိုးဝှတ်ဒီရေနေခြည်ဦးနှင်းခါးမိုးပန်းဗေဒါဖို့ ဝိန်းမှသူရဲကောင်းများ..မဖြူဖြူသင်းမသဒ္ဓါမာယာမဂ္ဂဇင်းမျိုးဆက်အမှတ် (၅)မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေးလေဆန်ပျံမဲ့မျိုးဆက်သစ်၏ ငြိမ်းချမ်းဌက်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် မိုင် ၃၀၀၀ ခရီးသည်ပြည်သူ့အသံလင်းလက်ကြယ်စင်လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲသမိုင်းထဲကရက်စွဲများသီရိလင်္ကာရောက်သံဃာတော်များ(မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအစည်းအရုံး)အဖွဲ့ဒေါင်းတမာန်phyowai-mmpဒီမိုဝေယံအမိမြန်မာပြည်သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာများမျိုးဆက်များ ၉၆မျိုးချစ်မြန်မာအရှင်မေတ္တာစာရအသားထဲမှ..လောက်ကောင်များအိမ်မက်အိမ်ကလေး
Kaw Mu Doh
Thadar (မသဒ္ဓါ )
----------------------------------------- */ /* EOT ----------------------------------------- */